Hidhaa, Ajjechaa fi tumichi Oromoo irratti akkumaa itti fufeti jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHidhaa, Ajjechaa fi tumichi Oromoo irratti akkumaa itti fufeti jira.
Jaal Abdii Raggaasaa;
Jaal Abdii Raggaasaa har’a mana murtii Bulchiinsa magaala sulultaatti dhiyaatanii turan. Himanni haga ammaatti kan itti hin banamne yoo ta‘u gaafii Abukaatoon isaanii dhiyeesaniin gara mana sirreessaa Buraayyutti akka deebi’an mana murtiin ajajameera. Hanga ammaatti Jaal Abdii eessa akka tursiisan waan beekamu hin jiru.
Namoonni Galmee jaal Abdii Raggaasaa jalatti himataman kudha sadii yoo ta’an maqaan namoota muraasaa kan armaan gadiiti:
1. Sanyii Amsaaluu
2. Soolaan Hayilee
3. Lataa Wiirtuu
4. Qabsoo Durummaa
5. Jibriil Bashir
6. Boonsaa Bafiqaaduu
7 . Amaanu’eel Zarihuun
8. Geediyoon Irraatii
9. Waaqumaa Assaffaa
10. Heenoki Abarraa
Yoo ta’an beelamni torban lamaa gaafaa waxabajjii 22, 2012 E.C ti beelamamee jira. Warri Buraayyuu jala bu’aa hordofaa.
Magaalaa Gimbii keessatti hidhaan miseensota paartiilee morkattootaa irratti haalaan jabaatee jira.
Obbo Tsaggaayee Geetaachoo itti gaafatamaa ABO G/W/Lixaa kan ta’an guyyaa har’aa ganama mana jireenyaa isaanii magaalaa gimbiirraa qabamaniiru.
Obbo Tsaggaayeen bara bulchiinsa TPLF badii tokko malee Oromummaa isaaniis qofa waggaan kudhan (10) itti murteeffamee mana hidhaa Qaallittii turanii kan ba’an yoggaa ta’u ammas bifa wal fakkaatuun badii tokko malee sababa miseensa ABO ta’aniif qofa qabamanii hidhaatti darbatamaniiru.
Oromoo kana teenyee walirratti ilaaluu hin qabnu, hidhaan kuni deemee deemee gara ooggansa ol aanaatti siqaa dhufeera. Kanaaf ammumaan waliif haa dirmannuun dhaamsa kooti.
Harargee Lixaa Shanan dhuuggoo, Hidhaan itti Fufee Jira.
” Hidhaa, Ajjechaa fi tumichi Qeerroo Oromoo irratti akkumaa itti fufeti jira.
Guyyaa kalee Qeerroo Shanan Dhuuggoo tan tumamtee hidhamtee
2, Durii Jawar
3,Qeerroo Qaayyoo jedhama Humna Addaan baayee tumamani hidhamani jiru.
Ammaalee Qeerroo baayeen Adamsaa akka jiran dhaggenyee jirra.
Waranni Bilxiginaa Humna Addaa tan jedhamtu Aanaa Shanan Dhuuggoo keessatti hidhaa, Tumachaa fi Reebichaa akka malee hammatee jira. Qeerroo kaleessa qabsa’ee Wayyannee biyyaa Ari’ee Opdo bilisoomsee har’as Waranaa Opdotiin tumamuu tahee Carraan Qeerroo.
Yeroon ni darbaa Qaamni Waranaa kana Ummataa irratti Bobbaasa jiru Bulchaa Naasruu usma’il kan jedhamu yoo tahuu miidhaa Ummataa Shanan Dhuuggoo irraa gahuuf kan itti gaafatamuu akka tahee beekuu qaba.
Injifannoon Ummataa Oromootiif.”
Hanguma mataa keessa nu rukutan, JABAANNA; HUNDEE jabeeffanna!!
Kun barsiisaa Garramoo jedhama. Mana barumsaa Kaatolikii keessaa barsiisa. Guyyaa sadii dura magaalaa Naqamtee keessaa qabamee hidhame.
Barsiiiaan kun hawaasa biratti hedduu jalatama; saba isaas hedduu jaalata. Mana barumsaa barsiisu keessattis kabajaa fi jaalala guddaa qaba.
Garramoon ajaja mana murtii tokko malee qabamee hidhame.